OwnCloud inovandudza magumo-kusvika-kumagumo kunyorera | Linux Vakapindwa muropa
OwnCloud ndeye software suite mutengi-server kugadzira uye shandisa faira rekubata masevhisi. ownCloud inoshanda zvakafanana neDropbox, ine musiyano mukuru unoshanda wekuti wegaCloud Server Edition yemahara uye yakavhurwa sosi, uye nekudaro inobvumira chero munhu kuiisa nekuishandisa pasina muripo pane yakavanzika server.
Iyo zvakare inotsigira ekuwedzera ayo anotendera kuti ishande seGoogle Drive, ine online zvinyorwa zvinyorwa, karenda uye kusangana syncing, uye nezvimwe.
Kuvhura kwaro kunodzivirira kumanikidzwa zvivakwa, munzvimbo yekuchengetera kana muhuwandu hwevatengi vakabatana, pachinzvimbo chekuve nemipimo yakaoma (senzvimbo yekuchengetera kana muhuwandu hwevashandisi) inotsanangurwa chete nemasimba epanyama evhavha.
1 Chizvarwa chechipiri chekupedzisira-kusvika-kumagumo kunyorera kunosvika
2.1 Unowana sei?
Chizvarwa chechipiri chekupedzisira-kusvika-kumagumo kunyorera kunosvika
Owncloud yazivisa chizvarwa chechipiri chekuguma-kumagumo kunyorera (E2EE) yeiyo bhizinesi vhezheni. Neshanduro yechipiri, kugona kushandisa kiyi dzehardware dzakadai semakadhi akachenjera kana tokeni dze USB zvinogadzirwa.
Iyo E2EE plugin inogonesa kunyorera uye kudonhedza kuburikidza yakavanzika kiyi uye yeruzhinji kiyi chizvarwa zvakananga pane anotumira uye anogamuchira muwebhu browser.
E2EE yegaCloud Enterprise ndiyo yakachengeteka uye yakapusa nzira yekuchinjana mafaira akavharidzirwa pakati pevanhu vaviri kana kupfuura, zvisinei nechengetedzo yemukati yekuchengetedza inowanikwa mukambani.
Ichi zvinoreva kuti chero anotumira kana iye anogamuchira faira haana kusungirirwa kune yakasarudzika nharaunda.
Pasina mvumo yechitatu mapato uye kunyange manejimendi haakwanise kuwana iyo yakavharirwa mafaera, ayo asingakwanise kubviswa kunyangwe hodhi yehardware yakabiwa.
Uchishandisa makiyi ehurdhi ane kiyi yakavanzika isingambosiya chiratidzo ichi zvakanyanya kuwedzera kuchengetedzeka, anoudza Owncloud.
Iyo E2EE plugin zvakare inoita kuti zvive nyore kutumira mafaira akavharidzirwa neemail. Paunenge uchitumira tsamba kuburikidza neAptlook Owncloud plug-in, yekuwedzera kunyorera haichadiwe.
Anogamuchira anogashira ega kiyi mapaundi mushure mekunyoresa. Zvakare, zvinokwanisika, mafaira akakura anokonzeresa matambudziko pakutumira tsamba, kuti vadzore.
Encryption neiyo E2EE plugin ino chengetedza chengetedzo, nepo kudonhedzwa kwefaira rakatumirwa kunoitwa zvakananga mushandisi yewebhu mushandisi.
Kuona kuti kiyi yakavanzika haigone kuwanikwa, kudonhedzwa kwemakiyi efaira kunogona kuburitswa kune yekunze kiyi sevhisi, iyo zvakare inotsigira kutaurirana nevekunze Hardware tokeni.
Shure kwaizvozvo, iyi yakadzvanywa faira kiyi inoshandiswa nebrowser kunyatso decryption yefaira.
Kugovana faira kunogona kuitwa kuburikidza neepacloud Outlook plug-in, pamwe nechero webhu browser.
Sezvo kugovera faira kunoitika mukati meCloud, hapana zvirambidzo pamhando dzemafaira. Pakutanga, kwaive nemafaira ekukura kwefaira pakutumira maemail.
Ipo parizvino neiyo nyowani nyowani, uyu muganho hauchisiri dambudziko, sezvo izvo zvekubatirana hazvisati zvatumirwa, asi zvinongotorwa nemugashiri pane iyo Cloud server pachayo.
Vese vashandisi vane mukana wekugovana faira mukati meyakoCloud mushandisi interface kana nekutumira email yakananga kuburikidza neyavoCloud Outlook plug-in.
Zvirongwa zvekugovana zvinogona zvakare kuchinjwa chero nguva.
E2EE muchizvarwa chechipiri inogona kuwedzerwa kune chero vhezheni yeOnncloud Enterprise. Saka maneja kana chero munhu ane mhando iyi yeOnncloud edition iwe unogona kutora yemahara-mazuva makumi matatu kuyedzwa.
Gare gare, kune avo vanoda kuenderera nechinhu ichi, mutengo unosvika makumi maviri euros pagore pamushandisi, kutanga nevashandisi makumi mashanu varipo, sekureva kwekambani.
Sezvo nezvose zveCloud Enterprise maficha, E2EE kodhi yekodhi inowanikwa kune vatengi pachikumbiro kuitira kuti kunyorera kuve kunosimbiswa kwakazvimiririra.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » OwnCloud inovandudza magumo-kusvika-kumagumo kunyorera